Dzidza zvese zvine chekuita nechiyero chekuzorodza cheApple zvishandiso zvako | Ndinobva ku mac
Chimwe chezvinhu chatinotarisisa nacho kana tichitenga mudziyo kugona kwayo kuchengetedza uye kumhanya kwayo kana uchishanda nemapurogiramu akati wandei panguva imwe chete. Kunyanya paMac, icho chinhu chakakosha. Ichokwadi kuti neM1 chip nyowani kushanduka kwemakomputa aya kwave kubira. Chimwe chinhu chinotaurwa nezvacho zvakanyanya nekuda kweMacs matsva aya kugona kuzorodza komputa skrini uye huwandu hwepamusoro hwavanahwo. Iyo yakakwirira mwero iri nani? Asi mwero wokuzorodza ndewechii? Zvichandibatsira here?. Ndizvo zvatichaedza kutsanangura munyaya ino.
1 Chii chinonzi chiyero chekuvandudza skrini?
1.1 Zvakanakira uye zvakaipira chiyero chekuvandudza
2 Ngwarira neizvi. Refresh rate haina kufanana nechiyero chemuenzaniso.
3 The refresh rate paApple madivayiri
3.1 iPhone 12 ne13
3.2 Mac makomputa
Chii chinonzi chiyero chekuvandudza skrini?
Kana tichitaura nezve chiyero chekuvandudza, isu tiri kutaura nezve kukurumidza iyo zviri pachiratidziro zvinogadziridzwa. Kufanana nezvose zvinogona kuyerwa, tine nguva ino yatiri kuiongorora mumifananidzo pasekondi. Neiyi nzira, iyo chiyero chekuyera chinoshandiswa kuona chiyero chekuzorodza chepaneru Hertz (Hz).
Tinogona kutopindura mumwe wemibvunzo yatakazvibvunza pachedu pamavambo echinyorwa chino, pamusoro peiyi mitsetse. Iyo yakakwira mwero wekuvandudza kwescreen, ndiko kuwedzera kwemvura iyo mifananidzo inoonekwa mairi inoratidzwa. Chaizvoizvo nekuti munguva iyo inopfuura pakati peimwe neimwe yemifananidzo iyoyo munzvimbo iyoyo yenguva, isu tichave neyakagadziridzwa huru. Zvino, harisi goridhe rose rinopenya. Izvo zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti kune nhevedzano yezvinokanganisa zvinobatanidzwa uye izvo zvatichataura nezvazvo zvino. Asi sezvinowanzotaurwa kuti chifananidzo chakakosha mazwi ane chiuru, pano tinokusiira vhidhiyo iyo tsananguro iyi inoratidzwa.
Parizvino materevhizheni mazhinji, nharembozha, makomputa, uye masikirini zvishandiso, tIvo vanoshanda nereti yekuzorodza ye60 Hz. Kunyangwe ichokwadi kuti kune makomputa uko mareti aya anosvika manhamba anotyisa. Zvakanaka, isu tinewo mafoni anosvika kunhamba kusvika ku 144 Hz. Icho chinhu chakanaka nokuti kusvika kune yakakwirira yekuzorodza chiyero, sezvatakatoona, zvinoreva mifananidzo yakapfava uye nokudaro haingotaridzi zviri nani asiwo inoderedza kuneta kwekuona zvakanyanya. Izvo zvakakosha, munyika umo tekinoroji uye maratidziro ari kuwedzera kukosha uye anenge akakosha.
Kunyangwe zvagara zvichitaurwa kuti aya mareti ekuzorodza akaiswa mumidziyo yeGamers, zvinofanirwa kurangarirwa kuti musika niche watowedzera. makore mashoma apfuura uye akawanda mafoni uye mahwendefa atove nazvo zvakabatanidzwa. Isu tine muenzaniso wePad Pro uye iyo iPhone 12 uye 13, semuenzaniso.
Zvakanakira uye zvakaipira chiyero chekuvandudza
Zvinonyadzisa asi hazvisi zvose zvinobatsira pamitengo yakakwira yekuzorodza. Iwe unofanirwa kuongorora zvese zvakazara uye zvino zvataziva zvazvinoreva, ngatione kuti chii chinoitika kwazviri.
Fluidity uye kutsetseka. Izvi zvakajeka. Iyo yakakwira mwero wekuzorodza wechidzitiro chemudziyo, isu tine hukuru hwakatsetseka uye fluidity yemifananidzo. Izvi zvinoreva zvakare kuti shanduko yemushandisirwo inoshanduka, patinopuruzira pa iPhone kana kufambisa mbeva nekukurumidza pawebhusaiti paMac, kana kubva pane imwe application kuenda kune imwe, ichaitwa zvakanyanya mushe uye nekudaro ichave ine hushamwari. .
A yepamusoro refresh rate zvinoreva kuderera kwemaziso uye saka kuti isu tigone kunakidzwa zvirinani neruzivo nemasikirini.
Chinhu chikuru chakashata chekuve nechiyero chakakwirira chekuzorodza pasina mubvunzo a kushandiswa kwesimba kwepamusoro mumudziyo iwoyo. Izvi zvinoreva kuti isu tine kuzvitonga kushoma uye nekudaro, kana iri maPhones, inongoverengerwa mumhando dzePro dzine bhatiri rakakura.
Haasi ese arimo aripo ane 120Hz yekumutsiridza chiyero. Izvi zvakafanana nekuva neterevhizheni inokwanisa kutamba 8K zvemukati. Zvakanaka, asi kana zvirimo pachazvo zvisiri mu8K, saka isu hatina basa nekugona kweterevhizheni.
Iyo yakakura skrini uye yakakwira mwero wekuzorodza, iyo inonyanya kudhura mudziyo.
Ngwarira neizvi. Refresh rate haina kufanana nechiyero chemuenzaniso.
Mumwedzi ichangopfuura, vamwe vevagadziri vakaratidza zvishandiso zvine skrini inodarika chipingamupinyi che60 Hz yekuzorodza skrini, vakataurawo nezve panel sampuli rate. Isu tiri kutaura nezvenyaya yemamwe ma Samsung zvishandiso. Inoshambadzirwa kuti skrini yayo inozorodzwa pa120 Hz uye ine sampuli ye240 Hz.
Sample rate, zvakare yakayerwa muHertz, inoreva huwandu hwenguva iyo skrini inoteedzera kubata kubata. Saka, iyo yakakwirira frequency kukosha, yakaderera iyo touch latency kana purogiramu lag, uye kuwedzera kunzwa kwekuyerera uye kureruka kwemafambiro. Asi Hazvinei nemunhu watiri kutaura pano uye musakanganiswa. Nenzira ine mufungo, iyo yakakwira ese mareti, zviri nani.
The refresh rate paApple madivayiri
Kana tangove "nyanzvi" muyero yekuzorodza skrini uye isu totoziva nzira yekuisiyanisa kubva kune sampling frequency, ngatione Apple. ndeapi maturusi anowana mitengo yepamusoro uye kuti yakakosha sei.
iPhone 12 ne13
Ose ari maviri iPhone 12 ne13 ane masikirini ane mwero wekuzorodza unosvika 120 Hz. Muchiitiko ichi, chiyero chepamusoro chinouya mumhando dzepamusoro. Tichava ne120HZ pamhando dzePro. Chaizvoizvo kune nyaya yebhatiri uye nguva yekushandiswa kweiyo terminal. Dai vakaisa chidzitiro chemhando iyoyo mu iPhone mini, zvingangoita kuti muhafu yezuva taizofanira kutsvaga plug.
Tinogona pfupisa mwero wekuzorodza we iPhone seizvi:
iFoni 13 Pro uye iPhone 13 Pro Max Ivo vanoratidza Apple yazvino Super Retina XDR ine ProMotion, iyo ine inosiyana yekuzorodza mwero we10Hz kusvika 120Hz. iPhone 13 uye iPhone 13 Mini inoshandisa 60Hz.
Izvo zvakafanana zvinoenda kune iPhone 12 modhi
Zvingave zvishoma sei, kana iyo iPhone ine ProMotion, iyo Macs, zvakare. Asi usafunge kuti maMac ese. Usafunge kuti nekuti iwo makomputa anofanirwa kunge aine zvidzitiro zvine mitengo yakakwira yekuzorodza. Iwe unotoziva kuti iyo yakakwirira chiyero uye yakakura skrini, inodhura zvakanyanya. Saizvozvo Mashoma mamodheru ane 120 Hz anoratidza akabatana nawo.
Imwe yezvakanakisa zvitsva zve nyowani 14-inch uye 16-inch MacBook Pros ndizvo chaizvo izvi. Iyo mini-LED inoratidzira inotsigira kusvika ku120 Hz yekuzorodza mwero nekuda kweProMotion. A ProMotion iyo inofanirwa kuvhurwa nesoftware. Naizvozvo, iwe unotoita intuit kuti isu tinogona kusiyanisa iyo chiyero. Chimwe chinhu chisiri chitsva, sezvo taigona kuzviita mune mamwe maMacs apfuura. Kana usingazivi kuti sei, pano iwe une dzidziso pamusoro pekuti iwe unogona sei kusiyanisa mwero wekuzorodza pa16-inch MacBook Pro. Tinogona kubva pa60 kusvika 47,95 Hz.
Nekudaro, iyi frequency ye120 Hz haitsigirwe nemaapplication ese panguva ino. Muchokwadi, Safari, semuenzaniso, haisati yagadziriswa. Zvisinei Safari Technology Preview, iyo beta vhezheni yeSafari, hongu. Ndizvo chaizvo mushanduro yazvino yebrowser iyi, 135, umo Apple yakaunza rutsigiro rweProMotion.
Kana uri kushamisika, ndinokuudza. Aihwa. Iko hakuna iMac ine ProMotion. Asi zvichavepo.
Ini handisi ini ndichazokushamisa iwe, asi sezvaungave wakafungidzira, iyo Apple Watch haina ProMotion skrini. Iyo yakanaka kwazvo retina kuratidza, hongu. Asi haisviki mareti e120Hz.
Iwe unotoziva zvishoma nezve izvi zvikamu zvemidziyo yako yaunofarira. Kubva Iye zvino ndine chokwadi chekuti iwe unobhadhara zvakanyanya kune iyo refresh rate paunoenda kunotenga terminal itsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Dzidza zvese zvine chekuita nechiyero chekuzorodza chemidziyo yako yeApple
Maitiro ekutumira mafoto neWhatsApp pasina kurasikirwa nemhando